Kutholwe usana lulahlwe endlini yangasese | News24
Kutholwe usana lulahlwe endlini yangasese
UPHITHENE amakhanda umphakathi wasendaweni yaseGomora ePlessislaer kulandela isigameko sokutholakala kosana olusanda kuzalwa lulahlwe emgodini wendlu yangasese kuyona le ndawo.
Lolu sana lomfana okusolakala ukuthi belusanda kuzalwa lutholwe yilunga lomphakathi uMnu Phumlani Zaca ngesikhathi eneka izimpahla zakhe ocingweni kade ewasha ngeSonto ekuseni mhla zingama-24 kuLwezi (November).
Elandisa i-Echo uMnu Zaca uthe lesi sigameko senzeke ngezithuba zehora leshumi ekuseni (10 am).
Uthe indlu yangesese lapho kutholakale khona ingane ngeyakhe, kodwa akanalo ulwazi ukuthi kungabe ubani oyifake phakathi.
“Ngesikhathi ngineka izimpahla zami zokugqoka ebengiziwasha ngizwe into ekhalayo engathi ikati kungathi ikhala ngemuva kwendlu yangasese ngabe senginquma ukuthi ake ngihambe ngiyobheka ukuthi kungabe leli kati likhalelani.
“Ngithe uma ngifika ngemuva kwendlu yangasese ngathola ukuthi akukho lutho. Ngithe uma ngabe sengilalelisisa kahle ngathola ukuthi kahle kahle le nto ikhala ngaphakathi endlini yangasese. Ngingenile ngaphakathi endlini yangasese ngoba ngithi ngifuna ukubona ukuthi kungabe yini lena ekhalayo.
“Ngihlangatshezwe yigazi esihlalweni sendlu yangasese ngabe sengiyaphuma ngiyobiza umakhelwane wami wesifazane ukuthi akeze azongibhekisa,” kubeka yena.
Uthe babe sebekhanyisa ngaphakathi endlini yangasese ngomakhalekhukhwini baqondanisa nomgodi wendlu yangasese nokuyilapho bebone khona usana lukhala.
Uthe usana baluthole lungagqokile lulele lubheke phezulu lugcwele indle.
“Kube yinhlanhla nje ukuthi le ngane siyithole isaphila ngoba asazi ukuthi umuntu oyifake lana uyifake nini. Elinye ilunga lomphakathi ebeselifikile ngemuva kokuba kuhlatshwe umkhosi lizinikelile ukuthi lona lizongena phakathi litakule usana ukuze luzophuma lusaphila.
“Kudingeke ukuba kukhishwe sonke isihlalo sendlu yangasese kwabe sekufukulwa lowo obekhipha usana. Ingane iphume isaphila amalunga omphakathi asizana ayigeza ayigqokisa kanti bese kufonelwe namaphoyisa.
“Sibuhlungu kabi ngalesi sigameko ngoba asazi ukuthi ubani lona ongenza into eyisihluku kangaka. Yini futhi engenza ukuthi kuzona zonke izindlu zangasese ezikhona anqume ukuthi uzozoyilahla la kwami?” Amalunga omphakathi akule ndawo ekade ekhona ngesikhathi uMnu Zaca exoxa ne-Echo, athe kuyaqala ukuthi kwenzeke isigameko esifana nalesi kule ndawo kanti bafuna ukuthi umuntu okwenzile ajeze.
“Nakuba kungeke kuze kube lula ukuthi atholakale kodwa amaphoyisa kumele asebenze ngokuzikhandla ukumthola ngemuva kwalesi sihluku asenzile. Uma ngabe lo muntu olahle le ngane ubengayifuni kungani engavelanga wayishiya esibhedlela okanye ahambe ayonikela ngayo kwabezenhlalakahle?
“Utheni nje unembeza wakhe eyishiya eyizwa ikhala ingeke ikwazi kwenza lutho ingenacala?” kusho elinye ilunga lomphakathi.
Lo mphakathi uthi uyakholelwa ekutheni le ngane ifakwe endlini yangasese ngezikhathi zasekuseni kodwa umuntu oyifakile wenza isiqiniseko sokuthi akekho umuntu ombonayo.
Okhulumela amaphoyisa aseMgungundlovu uSergeant Mthokozisi Ngobese usiqinisekisile isigameko.
“Ingane iyaphila amaphoyisa asathungatha umama wayo,” kubeka yena.